8 Advantages of Ecommerce to your Business in Myanmar - DigitalMarketing.com.mm
January 26, 2021 ♥28Likes
(သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Ecommerce ရှိခြင်းရဲ့ အားသာချက် 8 ချက်)
သင့်အပြင်မှာ ဆိုင်ခန်းဖွင့်ထားတယ်၊ Facebook Page ရှိတယ်၊ ကြော်ငြာထုတ်ပြီး ရောင်းရနေတယ်၊ ဒါကို လုံလောက်ပြီလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ထင်နေတာက လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
သို့ပေမယ့် များမကြာမီ အချိန်အတွင်းမှာ သင့်အနေနဲ့ Ecommerce Website တစ်ခုကနေ ဗဟိုပြုရောင်းချနိုင်ဖို့ မပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုရင် သင့်ပြိုင်ဘက်တွေထက် နောက်ကောက်ကျကျန်ခဲ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Stay Home ကာလအပြီးမှာ လူတွေရဲ့ Online ကနေ ဝယ်ယူကြတဲ့ အလေ့အကျင့်က ပိုပြီးအားကောင်းလာပါတယ်။
Online အသုံးပြုတာ ပိုမိုကျွမ်းကျင်လာကြပြီး Website တွေကနေ ဝယ်ယူတာ၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရွေးချယ်တာ၊ ပစ္စည်းမှာယူတာတွေကို လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နေကြပါပြီ။
ဒီလိုပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေကို သင့်အနေနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ပြိုင်ဘက်တွေထက် ခြေတစ်လှမ်းသာနေမယ်ဆိုတာ ပြောစရာတောင်မလိုလောက်ပါဘူး။
ဒီအခြေအနေကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ သင့်အတွက် Online ကနေ ရောင်းချခြင်း၊ ရွေးချယ်ဝယ်ယူခြင်း၊ အော်ဒါတင်ခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း စတာတွေကို အစမှအဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Ecommerce တစ်ခု တည်ဆောက်ထားဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။
ဒီတော့ Ecommerce ဆိုတာ သင့်အတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲ။ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် သင့်တော်မှန်ကန်ရဲ့လား။
အသေးစိတ်သိရှိရအောင် Ecommerce တည်ဆောက်ထားခြင်းရဲ့ အားသာချက် 8 ချက်ကိုပြောပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချက်ချင်း ကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ။
1. မြန်ဆန်လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း
ကာစတမ်မာတစ်ယောက်အတွက် Ecommerce မှဝယ်ယူခြင်းဖြင့် အလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကို အချိန်ကုန်သက်သာစွာ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Ecommerce မှတဆင့် ကုန်ပစ္စည်းတွေ အများကြီးကို တိုက်ရိုက်ရှာဖွေနိုင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဝေးလံတဲ့နေရာကို သွားဝယ်ရမယ့် ပစ္စည်းတွေ၊ အနီးအနားမှာမရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို Ecommerce မှတဆင့် အိမ်ကနေပဲ လွယ်ကူသက်သာစွာ ဈေးဝယ်ထွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – ကိုအောင်ဟိန်းထက်က အဝတ်လျှော်စက် ဝယ်ယူလိုတယ်။ အနီးအနားက ဆိုင်မှာ တကူးတက သွားရှာတဲ့အခါ တစ်ဆိုင်လုံးကြည့်ရှုပြီးမှ လိုချင်တာမရှိမှန်း သိခဲ့ရတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ အင်တာနက်ဖွင့်ပြီး Ecommerce တစ်ခုမှာ ဝင်ရှာတဲ့အခါမှာတော့ လိုချင်တာကို တွေ့ရတဲ့အပြင် ပရိုမိုးရှင်းဈေးနှုန်းနဲ့ပါ ရရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
Ecommerce နဲ့ဆိုရင် Online ဖွင့်၊ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရှာ၊ ရှိမရှိကြည့်ရှုပြီး အဆင်အပြေဆုံးနေရာကနေ အမြန်ဆုံး ဝယ်ယူလိုက်ရုံပါပဲ။
ကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးကနေ ရှာဖွေရွေးချယ်နိုင်တယ်၊ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ ဖတ်ရှုနိုင်တယ်၊ Cart ထဲထည့်ပြီး သိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ်… စတာတွေကို အချိန်တိုအတွင်း လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်လို့ရနေပါပြီ။
အဆုံးသတ်မှာတော့ သင့်ဝယ်ယူတွေအနေနဲ့ လိုချင်တာကို မပင်မပန်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလည်း အပြည့်အဝရရှိနိုင်မှာပါ။
2. Product Listings များတည်ဆောက်နိုင်ခြင်း
Product Listsing ဆိုတာကတော့ သင့်ကာစတမ်မာတွေ Ecommerce ထဲဝင်ရောက်လိုက်တဲ့အခါ (သို့) သူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကို ရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါ မြင်တွေ့ရမယ့် ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက် Product Listing တွေတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ
၁။ ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ကောင်းမွန်တဲ့ ပုံတွေကို အသုံးပြုပါ။ ဝါးနေတဲ့ပုံတွေ၊ မကြည်လင်တဲ့ပုံတွေက ဆွဲဆောင်မှုမရှိသလို ကာစတမ်မာတွေကို စိတ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။
၂။ ပုံတွေထည့်သွင်းတဲ့အခါ ထည့်သွင်းရမယ့် နေရာရဲ့ Dimensions (အလျား x အနံ) သတ်မှတ်တွေအတိုင်း အတိအကျ ချိန်ညှိပါ။
၃။ ထည့်သွင်းတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ရှေ့နောက်ဘယ်ညာ ပုံတွေအားလုံးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်သွင်းပါ။ တချို့သော Ecommerce တွေမှာ 360 အထိ ပတ်ချာလည်ကြည့်ရှုနိုင်‌အောင် ထည့်သွင်းဖော်ပြလို့ရပါတယ်။
၄။ ပစ္စည်းပုံစံအမျိုးကွဲတွေရှိတယ်ဆိုရင် တစ်ခုစီအတွက် တစ်ပုံချင်းပါဝင်စေဖို့ ဂရုစိုက်ထည့်သွင်းဖော်ပြပါ။ (အရောင်၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အမျိုးအစား)
Listings တွေကို သေချာတည်ဆောက်ဖော်ပြထားတဲ့အခါ ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း ပိုအားကောင်းပါတယ်။ ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ Offer ထည့်သွင်းလိုတာ၊ Discounts ဖော်ပြလိုတာ စတာတွေကို စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအသစ် ထည့်သွင်းဖို့ မြန်ဆန်လွယ်ကူသလို အခကြေးငွေလည်း ကုန်ကျမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
3. ကုန်ကျစရိတ် လျော့ချနိုင်ခြင်း
Ecommerce ရဲ့အားသာချက်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ ကုန်ကျစရိတ်များစွာ လျှော့ချနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်မှာ ဆိုင်ခန်းဖွင့်တဲ့အခါ ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းခ၊ ပြုပြင်စရိတ်၊ ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်၊ ကုန်သိုလှောင်ခ၊ ဝန်ထမ်းလစာ စတာတွေအတွက် အပိုကုန်ကျစရိတ်တွေ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ecommerce နဲ့ဆိုရင်တော့ ဆိုင်ခန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရတဲ့ စရိတ်စကတွေ ကုန်ကျတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အပြင်ဆိုင်ခန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ့် ကုန်ကျစရိတ်တွေ အများကြီး သက်သာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. ကာစတမ်မာများအတွက် အချိန်ပြည့် အဆင်သင့်ရှိနေခြင်း
Ecommerce တစ်ခုပေါ်မှာ ကုန်ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာ 24 နာရီ/7ရက်ပတ်လုံး အချိန်ပြည့်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကာစတမ်မာတွေအနေနဲ့ ညသန်းခေါင်မှာဖြစ်စေ၊ ပိတ်ရက်ကာလမှာဖြစ်စေ၊ မည်သည့်နေရာ ဒေသကနေမဆို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
ကာစတမ်မာတွေအနေနဲ့ ဝယ်ယူရတာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် နောက်တခေါက်ထပ်လာဝယ်ဖို့ လက်နှေးနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ ဝယ်ရတာ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် Free Shipping/ Delivery တွေ၊ Discounts, Coupons စတာတွေကို အခါအားလျော်စွာ လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
5. ရောက်ရှိနိုင်စွမ်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်ခြင်း
အပြင်မှာဆိုင်ခန်းဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင် ဝယ်သူအရေအတွက် အကန့်အသတ်နဲ့သာ ရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ပေးနိုင်ရင်တောင် နေရာဒေသ အလှမ်းဝေးမယ်ဆိုရင် လာရောက်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။
Ecommerce နဲ့ဆိုရင် မည်သည့်နေရာဒေသမှမဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အတွက် ကာစတမ်မာအသစ် များစွာဆီကို ရောက်ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Online မှာဘဲ ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ အပြင်မှာပါ ဆိုင်ခန်းရှိသည်ဖြစ်စေ Ecommerce ရှိထားခြင်းက ရောက်ရှိနိုင်စွမ်း အကန့်အသတ်မရှိတာကြောင့် ဈေးကွက်အသစ်တွေ ချဲ့ထွင်ဖို့ အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါ။
6. အရည်အသွေးနှင့် ဈေးနှုန်းများ နှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း
Ecommerce မှာဆိုရင် ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ (ပစ္စည်းကောင်း၊ ဈေးတန်ပြီး လူပိုဝယ်ချင်လောက်မယ့် ပစ္စည်းကို ဖော်ထုတ်ဖို့) ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရည်အသွေး၊ ဈေးနှုန်း စတာတွေကို အလွယ်တကူ နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။
Ecommerce မှာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းရဲ့ အသေးစိတ်တွေအထိ ရှိနေတဲ့အတွက် နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ပိုမြန်ဆန်လွယ်ကူပြီး အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်။
အပြင်ဆိုင်ခန်းမှာဆိုရင် ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိသလောက်ပဲ သိရှိနိုင်တာကြောင့် အသေးစိတ်တွေအထိ နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ကုန်ပစ္စည်းများစွာ ထည့်သွင်းထားခြင်းက ဝယ်သူတွေအတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူး ရရှိစေမှာပါ။ ပစ္စည်းများစွာ ရှိနေခြင်းကြောင့် ကာစတမ်မာတွေ ဝယ်ယူတဲ့အခါ ပိုယုံကြည်ချက်ရှိပြီး သူတို့နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကိုရရှိစေမှာပါ။
7. ဝယ်သူများကို မြန်ဆန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်း
Online ကနေ ရောင်းချတဲ့အခါ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှုတိုင်းက ပိုပြီးတော့ လွယ်ကူမြန်ဆန်ပါတယ်။ အော်ဒါတက်တဲ့အခါ ရောင်းချသူထံ ချက်ချင်းဝင်ရောက်လာသလို ပစ္စည်းအကြောင်း မေးမြန်းခြင်း၊ ပို့ဆောင်မှု အခြေအနေ၊ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း စတာတွေကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်သူဘက်က အော်ဒါကို ထိရောက်မြန်ဆန်စွာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သလို Products Return Management (ကုန်ပစ္စည်းလဲလှယ်လိုတဲ့အခါ၊ ငွေပြန်အမ်းဖို့ လိုလာတဲ့အခါ) စတာတွေကိုပါ လွယ်ကူစွာ ကိုယ်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ecommerce နဲ့ဆိုရင် ဈေးကွက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုပါ လိုက်လျောညီထွေ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – ဝယ်သူတစ်ယောက်က သူလိုချင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ကုန်နေတဲ့အခါ “Notify Me” နှိပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းရောက်လာတဲ့အခါ သူ့ကိုအသိပေးမှာဖြစ်သလို ရောင်းချသူဘက်ကိုလည်း Stock ဖြည့်ဖို့ လိုနေကြောင်း သိရှိစေပါတယ်။ ပစ္စည်းရဲ့ ဝယ်လိုအားကိုပါ တွက်ချက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
8. တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေမှုစနစ်များစွာ ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း
Ecommerce မှာဆိုရင် တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Payment Gateway တွေကို တပ်ဆင်ထားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
ကာစတမ်မာတွေအနေနဲ့ ဝယ်ယူမှုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် သူတို့နှစ်သက်ရာ Payment Method ကိုရွေးချယ်ပြီး ငွေချေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူသုံးများတဲ့ Banking တွေကို ချိတ်ဆက်ထားသလို Cash on Delivery (အိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်) နဲ့လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Payment Gateway တပ်ဆင်တဲ့အခါ ကနေဦးအစမှာပဲ စရိတ်စက ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဘဏ်တွေကိုပဲ လစဉ်ကြေးပေးဆောင်သွားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Ecommerce တည်ဆောက်ထားခြင်းအားဖြင့် ရရှိလာမယ့် အားသာချက်တွေ၊ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သိမြင်ထားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
လက်ရှိကာလမှာ မိတ်ဆွေအတွက် Ecommerce တစ်ခုလုံးကို “အခမဲ့” တည်ဆောက်ပေးသွားမယ့် နှစ်သစ်ကူးပရိုမိုးရှင်းလည်း ရှိတာကြောင့် လက်လွတ်မခံဘဲ ရယူထားဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
အခုလို သင့်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် Article တွေကို လက်လွတ်မသွားစေဖို့ အောက်ပါလင့်မှတဆင့် Form ဖြည့်စွတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
အဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ သာယာအဆင်ပြေတဲ့ တရက်တာလေးဖြစ်ပါစေ။ နောက်ပို့စ်တွေမှာ ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။
advantages of ecommerce benefits of ecommerce website digital marketing in myanmar Ecommerce Ecommerce in Myanmar Ecommerce Website ecommerce website in myanmar